ကိုဗစ်ဟာ လေထဲ ကနေ ကူးတယ် လို့ အမေရိကန် က ကြေညာ လိုက်ပါပြီ သတိရှိကြပါ – Let Pan Daily
ကိုဗစ်ဟာ လေထဲကကူးတယ်လို့ CDC က ဆိုလိုက်ပါတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံ ကူးစက်ရောဂါဌာန CDC က ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဟာ (airborne) လေထဲကကူးစက်နိုင်တယ်လို့ ဆိုလိုက်ပါတယ်။
သောကြာနေ့က ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာ ကိုဗစ်ဟာ လူ အချင်းချင်း အနီးကပ်ထိတွေ့မှုကနေ ကူးစက်နိုင်တယ်လို့ ယူဆထားခဲ့ရာက အခုအခါ လေထဲကနေ အသက်ရှုရင်း ကူးစက်နိုင်တယ်လို့ guideline ကို ပြင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ အရင်ကတည်းက သိပ္ပံပညာရှင်တွေက အခုလိုပြင်ဆင်ဖို့ တိုက်တွန်းခဲ့တာပါ။
ဇူလိုင်လတုန်းက သိပ္ပံပညာရှင် ၂၃၉ ယောက်ဟာ Clinical Infectious Diseases မှာ ကိုဗစ်ဟာ airborne transmission ဖြစ်တယ်ဆိုတာ အသိအမှတ်ပြုပေးဖို့ case reports တွေ ဓာတ်ခွဲခန်းသုသေသနတွေကို အခြေပြုပြီး ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကို တောင်းဆိုခဲ့ဖူးပါတယ်။
အခုလို ကိုဗစ်ဟာလေထဲကကူးနိုင်တယ် လို့ သတ်မှတ်လိုက်တာနဲ့ ဘာလုပ်သင့်သလဲ?
ဘက်စ်ကား၊ လေယာဉ်ပျံ၊ ရထားတွေထဲမှာ ကူးစက်မှုကို ကာကွယ်တားဆီးဖို့ Mask မတပ်မနေရ စည်းကမ်းချရပါမယ်။ ကိုဗစ်လူနာကို Test စစ်ဖို့လိုက်ခေါ်ရင် အကုန်လုံးကို ကားတစ်စီးထဲ ကြာရှည်စွာမြို့ပတ်ပြီး စုခေါ်တာ မလုပ်သင့်ပါ။ ကားပေါ်မှာ ရေသောက်၊ mask ချွတ်ရာကနေ၊ စကားပြောရာကနေ ကူးစက်သွားနိုင် ပါတယ်။
ရုံးတွေမှာ လေကောင်းလေသန့်ရဖို့ ဂရုစိုက်ရပါတော့မယ်။ စင်ကာပူမှာ လိုအမြဲ mask တပ်ခိုင်းနိုင်ရင် ပိုကောင်းပါတယ်။ ရုံးတွေ၊ အလုပ်တွေမှာ ထမင်းစားချိန်မှာ ထမင်းအတူ စုစားခြင်းကို လုံးဝတားမြစ်ရပါတော့မယ်။ ထမင်းစားချိန်မှာ Mask ချွတ်ရတာမို့ အတူစားရင် ကျိန်းသေကူးစက်ဖို့ များသွားပါပြီ။
လေထဲကနေ ကူးစက်နိုင်မှုလျော့အောင် ပြတင်းပေါက်တွေဖွင့်ပြီး လေကောင်းလေသန့် လေအဝင်အထွက်ကောင်းအောင် လုပ်ပေးရပါတော့မယ်။ အခု အမေရိကန်နိုင်ငံကူးစက်ရောဂါဌာန CDC က လူချင်း အနည်းဆုံး ၆ ပေအကွာကနေပြီး mask တပ်ပြီးနေဖို့ ပြောနေပါပြီ။ Mask မတပ်မနေရကို ပိုမိုတင်းကျပ်စွာ ကျင့်သုံးရပါတော့မယ်။
ကျနော်တို့က အိမ်တံခါးဝက တံခါးခေါက်ရင် Mask တပ်ပြီးမှ မေးထူးခေါ်ပြောလုပ်လို့ရပါတော့မယ်။ နေမကောင်းရင် အိမ်မှာနေခိုင်းပြီး သီးသန့်ခွဲနေနိုင်ဖို့ ကြိုးစားရပါမယ်။ အရှင်းလင်းဆုံးပြောရရင် နဂိုက နှာချေခြင်း၊ ချောင်းဆိုးခြင်းကထွက်လာတဲ့ အမှုန်အမွှားကကူးတယ်လို့ သတ်မှတ်ခဲ့ရာက အခုအခါ အသက်ရှု ထုတ်ရာ၊ စကားပြောရာကနေလည်း ကူးကြောင်း သတ်မှတ်ပါပြီ။
ဗိုင်းရပ်စ်ဟာ ၆ ပေထက် ပိုခွာပြီးနေလည်း ကူးနိုင်ပါပြီ။ ဩဂတ်စ်လက တွေ့ရှိခဲ့တဲ့စာတမ်းအရ ဆေးရုံကလေကို ပိုးမွေးမြူကြည့်ရာမှာ ဗိုင်းရပ်စ်တွေ့ခဲ့ရတဲ့အတွက် လေထဲမှာ ၆ ပေထက်ပိုပြီးသွားနိုင်တယ်ဆိုတာ သိပ္ပံနည်းကျသက်သေပြနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ပိုးမွေးကြည့်တာထက် သေချာတာမရှိပါ။
သိပ္ပံပညာရှင်တွေက WHO သည် အခုလိုသိပ္ပံ နည်းကျတွေ့ရှိချက်တွေကို အသိအမှတ်ပြုဖို့အချိန်ကျရောက်ပြီလို့ ဆိုလိုက်ပါတယ်။
ကိုဗဈဟာ လထေဲကကူးတယျလို့ CDC က ဆိုလိုကျပါတယျ။ အမရေိကနျနိုငျငံ ကူးစကျရောဂါဌာန CDC က ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈဟာ (airborne) လထေဲကကူးစကျနိုငျတယျလို့ ဆိုလိုကျပါတယျ။
သောကွာနကေ့ ထုတျပွနျခကျြထဲမှာ ကိုဗဈဟာ လူ အခငျြးခငျြး အနီးကပျထိတှမှေု့ကနေ ကူးစကျနိုငျတယျလို့ ယူဆထားခဲ့ရာက အခုအခါ လထေဲကနေ အသကျရှုရငျး ကူးစကျနိုငျတယျလို့ guideline ကို ပွငျလိုကျတာဖွဈပါတယျ။ အရငျကတညျးက သိပ်ပံပညာရှငျတှကေ အခုလိုပွငျဆငျဖို့ တိုကျတှနျးခဲ့တာပါ။
ဇူလိုငျလတုနျးက သိပ်ပံပညာရှငျ ၂၃၉ ယောကျဟာ Clinical Infectious Diseases မှာ ကိုဗဈဟာ airborne transmission ဖွဈတယျဆိုတာ အသိအမှတျပွုပေးဖို့ case reports တှေ ဓာတျခှဲခနျးသုသသေနတှကေို အခွပွေုပွီး ကမ်ဘာ့ကနျြးမာရေးအဖှဲ့ WHO ကို တောငျးဆိုခဲ့ဖူးပါတယျ။
အခုလို ကိုဗဈဟာလထေဲကကူးနိုငျတယျ လို့ သတျမှတျလိုကျတာနဲ့ ဘာလုပျသငျ့သလဲ?
ဘကျဈကား၊ လယောဉျပြံ၊ ရထားတှထေဲမှာ ကူးစကျမှုကို ကာကှယျတားဆီးဖို့ Mask မတပျမနရေ စညျးကမျးခရြပါမယျ။ ကိုဗဈလူနာကို Test စဈဖို့လိုကျချေါရငျ အကုနျလုံးကို ကားတဈစီးထဲ ကွာရှညျစှာမွို့ပတျပွီး စုချေါတာ မလုပျသငျ့ပါ။ ကားပျေါမှာ ရသေောကျ၊ mask ခြှတျရာကနေ၊ စကားပွောရာကနေ ကူးစကျသှားနိုငျ ပါတယျ။
ရုံးတှမှော လကေောငျးလသေနျ့ရဖို့ ဂရုစိုကျရပါတော့မယျ။ စငျကာပူမှာ လိုအမွဲ mask တပျခိုငျးနိုငျရငျ ပိုကောငျးပါတယျ။ ရုံးတှေ၊ အလုပျတှမှော ထမငျးစားခြိနျမှာ ထမငျးအတူ စုစားခွငျးကို လုံးဝတားမွဈရပါတော့မယျ။ ထမငျးစားခြိနျမှာ Mask ခြှတျရတာမို့ အတူစားရငျ ကြိနျးသကေူးစကျဖို့ မြားသှားပါပွီ။
လထေဲကနေ ကူးစကျနိုငျမှုလြော့အောငျ ပွတငျးပေါကျတှဖှေငျ့ပွီး လကေောငျးလသေနျ့ လအေဝငျအထှကျကောငျးအောငျ လုပျပေးရပါတော့မယျ။ အခု အမရေိကနျနိုငျငံကူးစကျရောဂါဌာန CDC က လူခငျြး အနညျးဆုံး ၆ ပအေကှာကနပွေီး mask တပျပွီးနဖေို့ ပွောနပေါပွီ။ Mask မတပျမနရေကို ပိုမိုတငျးကပျြစှာ ကငျြ့သုံးရပါတော့မယျ။
ကနြျောတို့က အိမျတံခါးဝက တံခါးခေါကျရငျ Mask တပျပွီးမှ မေးထူးချေါပွောလုပျလို့ရပါတော့မယျ။ နမေကောငျးရငျ အိမျမှာနခေိုငျးပွီး သီးသနျ့ခှဲနနေိုငျဖို့ ကွိုးစားရပါမယျ။ အရှငျးလငျးဆုံးပွောရရငျ နဂိုက နှာခခြွေငျး၊ ခြောငျးဆိုးခွငျးကထှကျလာတဲ့ အမှုနျအမှားကကူးတယျလို့ သတျမှတျခဲ့ရာက အခုအခါ အသကျရှု ထုတျရာ၊ စကားပွောရာကနလေညျး ကူးကွောငျး သတျမှတျပါပွီ။
ဗိုငျးရပျဈဟာ ၆ ပထေကျ ပိုခှာပွီးနလေညျး ကူးနိုငျပါပွီ။ ဩဂတျဈလက တှရှေိ့ခဲ့တဲ့စာတမျးအရ ဆေးရုံကလကေို ပိုးမှေးမွူကွညျ့ရာမှာ ဗိုငျးရပျဈတှခေဲ့ရတဲ့အတှကျ လထေဲမှာ ၆ ပထေကျပိုပွီးသှားနိုငျတယျဆိုတာ သိပ်ပံနညျးကသြကျသပွေနိုငျခဲ့ခွငျးဖွဈပါတယျ။ ပိုးမှေးကွညျ့တာထကျ သခြောတာမရှိပါ။
သိပ်ပံပညာရှငျတှကေ WHO သညျ အခုလိုသိပ်ပံ နညျးကတြှရှေိ့ခကျြတှကေို အသိအမှတျပွုဖို့အခြိနျကရြောကျပွီလို့ ဆိုလိုကျပါတယျ။
သင့်ကို တန်ဖိုးမထားတဲ့ ချစ်သူကို နောင်တရသွား အောင်လုပ်နိုင် မယ့် နည်းလမ်း(၅)မျိုး
အင်တာနက်သုံး ဖုန်းကြည့်တာ များလို့ မျက်ရိုး ကိုက်တတ်သူများ နဲ့ မျက်မှန် သမားများအတွက် ဆေးနည်း